Hisy fiantraikany manomboka rahampitso : nitombo hery hatrany i Fantala | NewsMada
Tsy afa-bela amin’ny toetry ny andro ny faritra avaratra. Nahazo orambe izy ireo tamin’ny fiandohan’ny taona teo ary nitohy hatrany izany. Amin’izao fotoana izao, mila miomana sahady koa ny mponina fa mitombo hery i Fantala ary hitondra onjabe sy rivotra ho an’iny faritra iny. Araha-maso rahateo ny fivoarany.
Rahampitso, hanomboka ho hita taratra any amin’ny tapany avaratry ny Nosy ny fisian’ny rivodoza Fantala. Nitombo hery ka lasa cyclone tropical intense i Fantala. Tombanana hitombo haavo ny ranomasina, ka nisy onja telo na efatra metatra any amin’ny morontsiraka avaratra atsinanana, nanomboka alina. Arahi-maso akaiky ny fivoaran’ny rivodoza. Hita fa mihamafy hatrany ny fitsoky ny rivotra eto Madagasikara vokatry ny fisiany, miampy ny alizay matanjaka.
Miakatra ho 175 km isan’ora koa ny rivotra entin’i Fantala ary ahitana tafiotra mahatratra 245 km isan’ora. Mikisaka miankandrefana hatrany izy ary mahavita 18 km isan’ora. Omaly tamin’ny 9 ora maraina, tany amin’ny 1 120 km atsinanan’Antsiranana na koa any amin’ny 1 051 km atsinanana somary avaratra atsinanan’i Vohemar no nisy ny foibeny. Iangaviana noho izany ny mpampiasa ranomasina amin’ny morontsiraka atsinanana iray manontolo mba tsy hiandriaka fa mahery be ny ranomasina ary mafy ny fitsoky ny rivotra. Nahazo filazana mena manambara loza mitatao momba ny herin’ny rivotra mafy entin’ny alizay any avaratra atsinanana sy atsimo.
Momba ny toetry ny andro anio, ho an’ny tapak’andro hariva, hitohy ny orana miatoato any Sava, Analanjirofo ary Atsinanana. Hanjombona arahina erika manify any Vatovavy-Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Taolagnaro, any atsinanan’i Sofia ary ny ilany atsinanan’ny ati-tany. Handrahona ny andro amin’ny faritra sisa rehetra. Ho mafy ny rivotra amin’ny morontsiraka atsinanana, avaratra andrefana ary eto Analamanga.